लुम्बिनी भ्रमण वर्षको मध्य चलिरहँदा पर्यटकहरु भने खोज्नु पर्ने अवस्था ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
लुम्बिनी भ्रमण वर्षको मध्य चलिरहँदा पर्यटकहरु भने खोज्नु पर्ने अवस्था ! (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Aug 31, 2019
१. लुम्बिनी भ्रमण बर्षको मध्य चलिरहदा पर्यटकहरु भने खोज्नु पर्ने अवस्था
लुम्बिनी भ्रमण बर्षको मध्य चलिरहदा पर्यटकहरु भने खोज्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । पूर्व तयारी, आवश्यक छलफल र लापरवाहीबीच लुम्बिनी भ्रमण बर्ष घोषणा गरिदा यो हविगत भएको प्रष्ट छ । बुद्ध र लुम्बिनीको नाम बेच्दा पर्यटक आइहाल्छन् भन्ने भ्रम पालेर बसेकाहरुको हतारोले मुलुकले कस्तो अवस्थाको सामना गर्नु प¥यो त्यस तर्फ लेखाजोखा आवश्यक देखिएको छ ।
तथ्यांक पल्टाउँदा पनि लुम्बिनी भ्रमण गर्ने धेरै आन्तरिक पर्यटक छन् भने भारतबाट पनि उल्लेख्य पर्यटक आएको देखिन्छ । तर दुर्भाग्य पासपोर्ट प्रयोग गर्नेहरुको संख्या भने न्यून छ । यसपटक प्रदेश ५ सरकारको जिम्मामा रहेको लुम्बिनी भ्रमण बर्षमा लुम्बिनीलाई केन्द्रित गरेर प्रदेश ५ का अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको पनि प्रचार प्रसार गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको थियो ।
तर लुम्बिनी पुग्ने मुख्य स्थलमार्ग भैरहवा लुम्बिनी सडकको दुरावस्था, तराईको मौसम र त्यसमाथि आवश्यक संरचनाको अभावले भ्रमण बर्ष नै प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रष्ट देखिदा अन्य गन्तव्यको सपना देख्नु प्रदेश ५ सरकारका लागि खिल्ली उडाउने पक्ष बनेको छ । भ्रमण बर्षका लागि तोकिएको समयावधि अझै केही बाँकी छ तर अहिले देखिएको पर्यटकको तथ्यांक हेर्दा पनि अवस्था उत्साहजनक नभइ निराशाजनक बन्ने निश्चित छ ।
२. बर्दियावासीलाई आरक्षका वन्यजन्तुबाट जोगाउन १२ किलोमिटर लामो पर्खाल लगाइदै
वन्यजन्तु आरक्षहरु पर्यटक भित्र्याउने महत्वपूर्ण माध्यम हुन । नेपालमा भएका वन्यजन्तु आरक्षहरुले यस्को धर्म निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर आरक्षको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले भने वन्यजन्तु हेर्न जंगल जानु नपर्ने तर घरमा नै स्वागत गर्न पाइने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
तर योसंगै आरक्ष वरपर जनधनको क्षति बढेकोप्रति भने सर्वत्र चिन्ता जाहेर गर्न थालिएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केको पाटे बाघले हालसालै बर्दियामा दुई जनालाई शिकार बनायो । यो त्रास यहींमा मात्र सीमित छैन । यस्ता धेरै क्षतिहरु बर्दियावासीले भोगिसकेका छन् । तर अब जंगली वन्यजन्तुको सम्भावित क्षति न्यून गर्न मधुवन नगरपालिका अघि सरेको छ । संघीय सरकार र आरक्षले क्षतिप्रति ध्यान नपु¥याएपछि मधुवन नगरपालिकाले जैविक मार्गमा १२ किलोमिटर लामो पर्खाल लगाउने अभियान आरम्भ गरेको छ । यो पर्खाल निर्माण भइसकेपछि बर्दियावासीको समस्या सधैका लागि टर्ने आशा गरिएको छ ।
३.पाल्पावासीलाई मकैको विउमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान थालियो
परनिर्भरता बढ्दो छ , आफ्नै खेतबारी बाझो राखेर आत्मनिर्भर बन्न खोज्ने हाम्रो प्रयास वास्तवमा मुर्खपन भन्दा बढी केही होइन पनि । तर अब नेपालमा जति छन् त्यहीबीचबाट पनि आत्मनिर्भरताको खोजी सुरु गरिएको छ । यो वास्तवमा सुखद पाइला हो पनि । पश्चिम नेपालको रमणीय पहाडी जिल्ला पाल्पा धेरै अर्थमा सम्पन्न छ तर पाल्पाले पनि बाहिरबाट निर्यात गरिएको धेरै वस्तुमा आफुलाई पनि निर्भर बनाउदै आएको छ ।
यही अवस्थाबीच अब पाल्पाले आफ्नो जिल्लाको मुख्य बालीकोरुपमा रहेको मकैको बीउबाट आत्मनिर्भरताको पहल थालेको छ । मकैको वीउमा पाल्पावासीलाई आत्मनिर्भर बनाएपछि मकैको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न पाल्पाका स्थानीय सरकारहरु लागिपरेका छन् । अब काम गर्ने जति विदेश गए भनेर नभई जति छौ त्यतिबाट आत्मनिर्भरताको पहल खोजी गरिनु जरुरी छ , जुन पाल्पाका स्थानीय तहले सुरु गरेका छन् ।
विभिन्न मुलुकमा अलपत्र १ हजार ११५ नेपाली स्वदेश फर्किए
बेलका नगरपालिका प्रमुखविरुद्ध राके जुलुस
बालुवा–गिट्टी दोहन गर्दै आएका सात वटा ट्याक्टर प्रहरी नियन्त्रणमा
सुनसरीको इनरुवासहितका पालिकाहरुमा धमाधम लकडाउन
नेकपाका शीर्ष ४ नेताको छलफल निष्कर्षविहीन टुङ्गियो, लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्तीबारे चर्काचर्की
काठमाडौं, २० साउन । विभिन्न मुलुकमा अलपत्र एक हजार ११५ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।
विश्वराज तामाङ, उदयपुर, २० साउन । बेलका नगरपालिका भित्र भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्दै संघर्षरत